The Addams Family (1991) | MM Movie Store
၂၀၁၉ မှာရုံတငျပွသခဲ့တဲ့ အဒမျဈကားတှနျးနဲ့ ခပျဆငျဆငျပါပဲ ။ ဇာတျလမျးကတော့ ဂိုးမဇျေ့မှာ တကျရျှဆိုတဲ့ဇနီးရယျ ၊ ဝန်ဒစတေးဆိုတဲ့သမီး ၁ ယောကျရယျ နဲ့ ပကျစလဆေိုတဲ့သား ၁ ယောကျရှိတယျ။ ဂိုးမဇျေ့ နဲ့ ဖကျစတာ ဆိုတဲ့ညီအဈကို ၂ ယောကျဟာ ရနျဖွဈပွီးနောကျပိုငျး အဈကိုဖွဈသူ ဖကျစတာဟ ၂၅ နှဈလုံးလုံး ပြောကျသှားခဲ့တယျ။
ထူးခြားမှုတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ သင်္ချိုင်းမြေပေါ်က အဒမ်စ်မိသားစုရဲ့ဇာတ်လမ်းလေပေါ့ ။
၂၀၁၉ မှာရုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ အဒမ်စ်ကားတွန်းနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ ။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ဂိုးမေ့ဇ်မှာ တက်ရ်ှဆိုတဲ့ဇနီးရယ် ၊ ဝန္ဒစတေးဆိုတဲ့သမီး ၁ ယောက်ရယ် နဲ့ ပက်စလေဆိုတဲ့သား ၁ ယောက်ရှိတယ်။ ဂိုးမေ့ဇ် နဲ့ ဖက်စတာ ဆိုတဲ့ညီအစ်ကို ၂ ယောက်ဟာ ရန်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အစ်ကိုဖြစ်သူ ဖက်စတာဟ ၂၅ နှစ်လုံးလုံး ပျောက်သွားခဲ့တယ်။
အဲ့ဒါကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အပိုင်စီးမဲ့ ဒေါက်တာ ပင်ဒတ်ခ်ျ လော့စ် နဲ့ အဲလ်ဖော့ဒ် တာလီတို့ဟာ ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဂိုးမေ့ဇ်ဆီ ဖက်စတာအတုအယောင်ကို ခေါ်ဆောင်သွားတာပေါ့ ။ အစအလယ်အဆုံး အကုန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားလေးမို့ …. မပြောပြတော့ဘူးနော် …. ဆက်လက်ကြည့်ရှုပေးကြပါရှင် ။